Wasiirka Gaashaandhigga “Heshiiska aan galabta saxiixnay ujeedkiisu waa Nabad in lagu wada noolaado”. “Sawirro” – Radio Muqdisho
Xabad joojin rasmi ah oo ka hirgasha labada dhinac
in la kala qaado labada ciidan ee dagaalamay inta wada-hadalku socdo muddo afar (4) casho gudahood ah.
in la furo wada-hadal muddo toban (10) bari gudahood ah oo ka bilaabata March 5, 2015 si xal rasmi ah loo gaaro.
In labada ciidan ku kala ekaadaan degmooyinka Guriceel iyo Dhuusamareeb ayna joojiyaan gurmad ciidan, saanad IWM inta xal rasmi ah laga gaarayo.
In dib loogu soo celiyo magaalada shacabkii dagaallada ku barakacay